Switch-giya Yekuedza Equipment Manufacturers |China Switch-giya Yekuedza Equipment Suppliers & Factory
GDHL-200A (GDHL-100A) Micro-Ohmmeter itsva
GDHL-200A (GDHL-100A) Micro-Ohmmeter inoshandiswa zvakanyanya kuyera loop kuramba uye kusangana nekupokana kwemajoini e weld, tambo, uye akasiyana HV switch mukati meindasitiri yemagetsi.
GDHL-200B / GDHL-500B / GDHL-600B Bata Resistance Tester (Microhm mita)
● High, pakati uye pasi voltage circuit breakers
● High, yepakati uye yakaderera voltage disconnecting switches
● High-current mabhawa majoini
● Cable & Welding majoini
Inokodzera yakakwira ikozvino, micro ohm kuyerwa.
GDHL-100HS 100A Handheld Bata Resistance Tester
Chigadzirwa chacho chinonyanya kushandiswa kupikisa kwekubata kwekuchinja mabatiki uye mamwe ma micro-ohm kuramba kuyerwa, uye bvunzo yekumhanyisa inokurumidza uye iko kurongeka kwakakwira.
GDHL-100B Bata Resistance Tester (Microhm Meter)
Kuitwa kweiyo conductive circuit yedunhu breaker yakakosha kuve nechokwadi chekushanda kwakachengeteka kwekuchinja.
GDGK-501 inopa simba kumagetsi edunhu kana mamwe maHV switch.
High voltage circuit breaker ndeimwe yeakanyanya kukosha kudzora midziyo musimba remagetsi.
GMDL-02A high-voltage circuit breaker simulation mudziyo unogadzirwa uchishandisa misimboti yenzvimbo yakakura-inorongwa gedhi arrays, magetsi emagetsi zvishandiso zvine dziviriro, nezvimwe.